Gaalkacyo: 3 qof oo lagu dilay magaaladda Gaalkacyo iyo howlgalo ay ciidamada Nabadgelyadu wadaan. | Sahan radio
Gaalkacyo: 3 qof oo lagu dilay magaaladda Gaalkacyo iyo howlgalo ay ciidamada Nabadgelyadu wadaan.
Gaalkacyo (SR): Magaaladda Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa lagu toogtay 3 nin oo ku sugnaa fagaaraha hore ee guriga ay ka deganyihiin magaaladda Gaalkacy.
Dadkaan ayaa waxaa dilay koox aan haybtooda la garanayn oo wata gaari nooca raaxada ah,waxaana ay ku fureen rasaas,waxaana goobta ku geeriyoday 2 nin halka ninka kalana uu dhawacii ugu dhintay isbitaalka guud ee magaaladda oo la gaarsiiyey.
Kooxda dilkaan gaystaan ayaa goobta ka baxsaday waxaana la xaqiijiyey in ay u fakadeen dhanka xaafadda koonfureed ee Baraxley ee ay ka taliyaan Maamulka Galmudug.,waxaana la sheegay in shakhsiyaadkani ay kazoo jedaan xaafadda baraxley ee koonfurta magaaladda Gaalkacyo.
Magaaladda Gaalkacyo ayaa waxaa iminka ka socda howlgalo balaran oo ay wadaan ciidan nabadgelyadda ee Gobolka iyadoo ay jiraan dad kala duwan oo lasoo qabtay wallow wali ay socdaan baaritaano.